ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းအကြောင်းရင်း ၆ ချက် - Hello Sayarwon
Dr. Sandar Lin မှ ရေးသားသည်။ 28/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူအတော်များများသည် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်းမျိုးကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ယင်းအပြုအမူသည် အာရှသားများအဖို့ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်သော်လည်း အနောက်တိုင်းသားများအဖို့ မဆန်းတော့ပါ။ အောက်ပါတို့သည် ကိုယ်လုံးတီးအိပ်စက်ခြင်းမှ ရရှိနိုင်မည့် သင်မကြားဖူးသေးသော အကျိုးရလဒ်များ ဖြစ်ပါသည်။
1. နှစ်ဦးသားချစ်ခြင်းကို တိုးလာစေခြင်း
အဝတ်အစားမပါဘဲ အိပ်စက်သူများသည် နှစ်ဦးသားချစ်ခြင်းကို တိုးလာစေကြောင်း ဗြိတိန်ရှိ အိပ်ရာခင်း ကုမ္မဏီတစ်ခုက အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၀၀ ကို သုတေသနပြုလုပ်ထားပါသည်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပင် ကိုယ်လုံးတီးအိပ်စက်သူများ၏ ၅၇ %သည် နှစ်ဦးသားချစ်ခြင်းတွင် စိတ်ပျော်ရွှင်မှုများ ရရှိကြပြီး ၄၈%သည် ကိုယ်လုံးတီးအိပ်စက်ခြင်းနှင့် သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
အိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာရန်အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းအပူချိန်သည် ဒီဂရီတစ်ဝက်ခန့် နိမ့်ကျသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ပျော်နေစေဖို့အတွက် သင့်ဦးနှောက်မှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို အသိအမှတ်မပြုခင် အပူချိန်ကို အနေအထားတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်လုံးတီးအိပ်စက်ခြင်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို မြန်မြန်အေးသွားစေပြီး အိပ်ပျော်သွားရန် ဦးနှောက်ကအလိုရှိနေသော အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို မြန်မြန်ရစေပါသည်။
ပူလွန်းသောကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ခြင်းများသည် သာမန်အားဖြင့် အိပ်ရေးမဝရုံသာ တွေးကြမည်ဖြစ်သော်လည်း အမှန်မှာ သင့်အတွက် အရေးကြီးသော မှတ်ဉာဏ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းတို့ကို ထိခိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်နေစဉ် စောင်ခြုံထားပါ။ ညအိပ်ဝတ်စုံကို သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အတူဘေးတွင်ထားပါ။ သင်သည် အိပ်နေရင်းနွေးထွေးမှုကို လိုလာမှ အသုံးပြုပြီး ချွေးစို့လာသည် ပူလာသည်ဟု ခံစားရပါက ထိုအရာများကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ ထိုနည်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
3. သွေးပေါင်ကို လျော့ကျစေခြင်း
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ ကိုယ်လုံးတီးအိပ်စက်ခြင်းက အောက်ဆီတိုစင်ဟော်မုန်းကို မြင့်တက်စေပါသည်။ ထိုဟော်မုန်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများကိုဖြစ်စေပါသည်။ အသားချင်းထိနေခြင်းက ဦးနှောက်ကို အောက်ဆီတိုစင်ဟော်မုန်း ထွက်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ ထိုဟော်မုန်းသည် နှလုံးကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျစေခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားတက်စေခြင်းနှင့် စိုးရိမ်သောကများကို လျော့နည်းစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။
4. အရေပြားအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။
ကျားမ အင်္ဂါများ၊ ချိုင်းနှင့် ခြေဖဝါးများသည် တစ်နေကုန် အဝတ်အစားများဖြင့် ကာထားခြင်းခံရသော နေရာများဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်လုံးတီးအိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အရေပြားကို အသက်ရှူဝစေပါသည်။ ထို့ပြင် အရေပြားရောဂါများဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ အားကစားသမားများတွင် ခြေထောက်စိုထိုင်းခြင်းကြောင့် နှင်းခူဖြစ်ခြင်းများကို လည်း လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။
5. လိင်အင်္ဂါများကို ပိုကျန်းမာစေခြင်း
အမျိုးသားများတွင် ကပ်ပယ်အိပ်သည် အပူချိန်ကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်စေပြီး ယင်းသည် သုက်ကောင်များကို ကျန်းမာစေပြီး မျိုးပွားအင်္ဂါများကို ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်စေပါသည်။
အမျိုးသမီးများတွင်လည်း မှိုရောဂါများ စွဲကပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပိုပြီး အေးလေလေ ခြောက်သွေ့လေလေ တဆေးမှိုများ မကပ်တွယ်နိုင်လေလေဖြစ်ပါသည်။
အဝတ်အစားများနှင့် မအိပ်ခြင်းကြောင့် ညဝတ်အင်္ကျီများ ဝယ်စရာ မလိုသည့်အတွက် ငွေကို ချွေတာရာရောက်ပါသည်။ အဝတ်များများကိုလည်း လျှော်ရန် မလိုတော့ပါ။ သင့်အိပ်ရာခင်းများကို မကြာခဏလျှော်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ညဝတ်အင်္ကျီများ ထည်လဲဝယ်ရခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
4 benefits sleeping naked
Assessed December 5, 2016